सुन तस्करीमा मुछिए मन्त्री देखि सचिवसम्म को–को तानिदैछन् हेर्नुस ? – rastriyakhabar.com
सुन तस्करीमा मुछिए मन्त्री देखि सचिवसम्म को–को तानिदैछन् हेर्नुस ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गएको पुस २१ गते अवैध रुपमा भित्रिएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबी ले बरामद गरेपछि धेरै रहस्यहरु एकपछि अर्को गरी खुल्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराकै सेटिङमा अवैध रुपमा सुन आयात हुने गरेको स्रँेतको दाबी छ । ३३ किलो सुन सहित पक्राउ परेका गोपाल शाहीले केही महिनायता ३ सय किलो सुन नेपालमा विमानस्थलबाटै ल्याएको बयान दिएपछि उक्त सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री महराको नाम जोडिएको हो ।
मुख्यत स् भन्सार कर्मचारीकै मिलेमतोमा विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सुन आइरहेको कुरामा दुईमत छैन । स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सारमा सुन तस्करीको सेटिङ मिलाउनकै लागि अर्थमन्त्री महराले माओवादी समर्थक सहसचिव नारायण सापकोटालाई प्रमुख भन्सार प्रशासकका रुपमा दुई महिनाअघि सरुवा गरेका हुन् ।
महराका छोरा निर्मल महरा ‘एटम’ र निजी सचिव नेत्र पौडेलको डिजाइनमा सुनतस्करी गर्नकै लागि सापकोटालाई एयरपोर्ट पठाइएको हो । गोपाल शाहीले ३ सय किलो सुन भित्र्याएको बयानदिए पनि अर्थमन्त्रीमा महरा आएपछि त्यो भन्दा ठूलो परिमाणमा सुन आएको स्रोतको दाबी छ ।
सीआइबीले भन्सारबाट पार भइसकेपछि बरामद गरेको सुन बरामद गरेको घटनाले पनि यसमा अर्थमन्त्री महरा तानिएका हुन् । माथिल्लो तहको सेटिङबिना एक जना भन्सार प्रमुखले मात्रै यति ठूलो परिणामको सुन तस्करी गर्ने अ‘ाट गर्दैनन् । यस घटनापछि अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका २९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
तर सीआइबीका अधिकारी भन्छन्, अवैध सुन आयातमा मुख्य दोषी भन्सारका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमै कारबाही गर्नुपर्छ अनिमात्र यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनसक्छ ।
अवैध सुन आयातमा पक्राउ परेका गोपाल शाही, सन्तोष काफ्ले र दिनबन्धु थापालाई सीआइबीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भएको छ । संगठित अपराध पुष्टी भएमा १५ बर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।
एयरपोर्ट भन्सारमा लामो समयदेखि कार्यरत रेडियो टेक्निसियन विन्दुकाजी महर्जन, तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादव र प्रमुख भन्सार अधिकृत टंक पौडेलले नै सुन तस्करीमा सेटिङ गर्दैआएको खुलेको छ ।
सुन तस्करीमा धेरै व्यक्तिहरूको संगलनता रहेको रहस्य बाहिर आउँदै छ । दृष्टि साप्ताहिकका अनुसार सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू र कर्मचारीको मिलोमतोमा सुन तस्करी सुरु भएको बुझिएको छ ।
को को मुछिन्छन् त्यो कुरा केही दिन पछि थाह हुनेछ । यसको लागि सरकारले तत्काल छानविन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सवत्र माग उठेको छ ।